Home Wararka NISA oo Sheegtay inay Qabatay Xubno Ka Tirsan Al-shabaab
NISA oo Sheegtay inay Qabatay Xubno Ka Tirsan Al-shabaab
Ciidamada Nabadsugidda Somalia ayaa howlgal qorsheysan oo ay ka fuliyeen xaafad ka tirsan Muqdisho waxa ay ku soo qabteen rag ka tirsan Al-Shabaab.
War kasoo baxay hay’adda NISA ayaa lagu sheegay in ciidamada ammaanka ay gacanta kusoo dhigeen koox Shabaab ah oo ku howlanaa dilal iyo weeraro qorsheysan oo ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho sida ay hadalka u dhigeen.
“7da Sabtembar, howlgal ayaa ciidanka amnigu kusoo qabteen koox Al-Shabaab ah oo ku howlanaa dilal iyo weeraro qorshaysan oo ay magaalada muqdisho ka fuliyaan, Ciidanka amnigu waxay naftooda u huraan soo qabashada argagixisada ah ayagoo khatar ku ah shacabka”.
Nabadsugidda Somalia ma aysan shaacin degmada iyo xaafadda uu si gaar ah uga dhacay howlgalka lagu qabtay xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee qorsheynayay dilalka iyo weerarada.
Hay’adda Nabadsugidda ayaa muddooyinkaan dambe Muqdisho ka waday howlgallo qorsheysan,iyaga oo shaacinayey in ay ku soo qabteen xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Previous articleWaraaq Furan oo ku Socota Xildhibaan walba oo ku jira Barlamanka Federaalka.
Next articleDuqeyn Diyaaradeed Oo Ka Dhacday Deegaano Hoostaga Degmada Jilib Oo Sarkaal Sare Oo Katirsanaa Ururka Al Shabaab
Axmed Madoobe oo Dowladda Ku Eedeyay duminta Dalka
Dhageeyso:-Beesha Saleemaan oo Go’aan ka qaadaneeyso Madaxweyne Xaaf iyo Shaqsiyaad Xukumadda...